Ku saabsan Amaanada - Carewell SEIU 503
Carewell SEIU 503 waa qoyska tababarka iyo manfacyada adag ee ay bixiyaan SEIU 503 daryeelka guriga iyo bixiyeyaasha taageerada shaqsiyadeed si kor loogu qaado noloshooda. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda Carewell iyo Ammaanada taas oo ka dhigaysa wax kasta oo suurtagal ah.
Sannadkii 2013, mid ka mid ah afartii daryeel-caafimaadeed ee Oregon iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyeed ma lahayn caymis daryeel caafimaad. Taasi waa sababta xubnaha SEIU 503 ay si adag ugu dagaallameen qandaraaska daryeelka guriyeedka 2013-2015 ee guuleysta Gobolka Oregon, kaas oo hirgeliyay qaab daryeel caafimaad oo cusub kaas oo ka caawiya u-qalmitaanka daryeelka guriga Oregon iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyeed inay helaan caymis daryeel caafimaad oo la awoodi karo.
Sannadkaas, ururku wuxuu kireystay laba aaminaad maarayn shaqaale: Oregon Homecare Workers Supplemental Trust, oo siisa Carewell SEIU 503 Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka, iyo Oregon Shaqaalaha Daryeelka Guryaha ee Oregon, oo siiya Carewell SEIU 503 Ilkaha, Aragtida, Maqalka, Caawinta Shaqaalaha Barnaamijka, iyo faa’iidooyinka Waqtiga Mushaharka La Bixiyo.
Muddo sanado ah, bixiyeyaasha xanaanada guriga waxay ogaayeen in sida ugufiican ee loo hubiyo amaan, daryeel tayo sare leh ee dhamaan macaamiisha — iyo dariiqa shaqo ee dhamaan bixiyeyaasha – ay ahayd in lagu qalabeeyo daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyadeed tababar caalami ah.
Sannadkii 2018, daryeelka guriga ee Oregon iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed waxay la yimaadeen wada-hawlgalayaasha bulshada si ay uga caawiyaan ansixinta Xeerka Guurtida 1534. Sharcigani wuxuu dejinayaa heerarka dhammaan daryeelka guriga ee Oregon iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed si loo hubiyo inay leeyihiin xirfadaha, aqoonta, iyo awoodaha lagu bixinayo daryeel iyo taageero tayo leh. 2019, daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed waxay sii wadeen inay abuuraan Iskaashiga Tababbarka ee SEIU 503, kalsoonida maaraynta shaqaalaha ee bixisa Tababbarka Carewell.